Macluumaad la xiriira is hortaagga lagu sameeyay Fahad Yaasiin | Dhacdo
Home Wararka Maanta Macluumaad la xiriira is hortaagga lagu sameeyay Fahad Yaasiin
Macluumaad la xiriira is hortaagga lagu sameeyay Fahad Yaasiin
Hadalhayn badan ayaa ka dhalatay warka sheegaya in muddo sideed saacadood ah Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Djibouti lagu xanibay diyaarad ay la socdeen xubno uu ka mid yahay Taliyihii hore ee Hay’adda NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Diyaaradan oo ka ambabaxay Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa 7:00 subaxnimo ee saakay ka degtay Garoonka Diyaaradaha Ambouli ee dalka Jabuuti oo transit ay ku ahayd, iyadoona duulimaadkeedu ku wajahnaa Caasimadda Muqdisho.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliya, Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa Dowladda Jabuuti ku eedeeyay inay si ula kac ah u xanibtay diyaaraddii uu la socday La taliyaha Amniga Qaranka, Fahad Yaasiin iyo Saraakiishii kale ee la socotay.
“Marka hore diyaaradda waxaa loo sheegay inay cilad jirto, muddo dhowr saacadood oo halkaasi ay ku xanibnaayeen, markaasi ka dib diyaarad kale ayuu tikit ka goystay, haddana mar labaad diyaaraddii waa la is hortaagay, ugu dambeyna waxay noqotay basaboorkii in laga reebo oo safarkiina laga xanibo.” Ayuu yiri Afhayeenka oo la hadlay VOA.
Afhayeenka ayaa yiri “Arrintaas waa arrinta Dowladda Federaalka Somaliya ay cambaareynayso, aadna ay uga xun tahay in sidaa loo maamulo, waxaana ugu baaqaynaa dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti inay arrintan iska xilsaaraan, oo masuuliyadeeda ay qaataan, una ogolaadaan Sarkaalkaasi iyo masuuliyiinta kale ee Soomaaliyeedba inay safarkoodaasi si ammaan ah u gutaan.”
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay inaanay Jamhuuriyadda Jabuuti is hortaagin diyaaraddii siday Fahad Yaasiin.
“Waxaa jira warar been abuur ah oo la wareejinayo barraha bulshada, oo la doonayo in jahwareer laga dhex abuuro Somaliya iyo Jabuuti.” Ayuu yiri Wasiirka oo warkan ku sheegay bartiisa Twitter-ka.
Wasiirka ayaa qoraal kale oo bartiisa uu soo dhigay waxa uu ku yiri “Dhammaan rakaabkii saarnaa dayuuraddii Turkish Airways ee maanta ee Muqdisho u socotay ay ku noqon doonto Istanbul, si ay u raacaan duulimaad kale oo Muqdisho u socda.”
Wasiirka ayaa dhanka kale sheegay inaanay Jabuuti marnaba soo faragelin doonin arrimaha gudaha ee Somaliya.
Diyaaradan ayaa galabta dib ugu duushay Magaalada Istanbul, iyadoona Fahad Yaasiin uu caawa ku hooyanayo hoteelkii uu magaaladaasi ka degenaa ee Swissotel.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in laamaha amniga dalka ay Hay’adda Duulista Rayidka ku wargeliyeen in duuliyaha 1aad ee diyaaradda Turkish Airlines ogeysiiyaan inaanay Fahad Yaasiin keeni karin Magaalada Muqdisho.
Is hortaagga lagu sameeyay imaanshaha Fahad Yaasiin ee Magaalada Muqdisho ayay dadka qaarkii qabaan inay kaga sii dari karto khilaafka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, inkastoo ay labaduba wajahayaan cadaadis caalamiya.
Previous articleBeesha Caalamka oo war ka soo saartay khilaafka Madaxda Qaranka
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo guddoomiyay shirka tiirka dhaqaalaha